Faras fuul | Fardaha Noti
Sidaan horay u sheegnayba way badan yihiin edbinta cayaaraha fardaha, dhexdooda fuulid, in kastoo ay u muuqato inay la mid tahay xulashooyinka kale, tani waxay ka kooban tahay farshaxanka ilaalinta saxda ah ee faraska, marka lagu daro ogaanshaha sida loo maareeyo, fuulitaanka tilmaamaysa aqoonta loo baahan yahay si loo daryeelo fardaha iyo isticmaalka qalabka ay tahay inaan isticmaalno.
Meeshan waxaad ka heli kartaa wax kasta oo la xiriira adduunka faras fardaha iyo fardaha. Ma hilmaami karno inay tahay isboorti aad u baahan oo ay tahay inaan si wanaagsan u daryeelno xoolaheena, qalab wanaagsan iyo raashin fiican si farduhu ugu fiicnaan karaan sida ugu fiican, marka lagu daro dhakhaatiirta xoolaha oo aad u jooga, si xoolaheena aysan u helin dhibaatooyin aan laga soo kaban karin.
Fuulista farduhu waa nashaad isboorti halkaas oo fuushanuhu ka shaqeeyo goobo badan oo jireed. Waxay ka caawisaa dhawaaqa murqaha, si loo ilaaliyo ...
Sida loo barto fardo fuulista
Farasku waa mid ka mid ah xayawaannada ugu jilicsanaanta taasna waxay si fiican ula qabsatay nolosha ...
Casharkaagii ugu horreeyay ee fuulista
Tani waxay noqoneysaa casharkii kuugu horreeyay ee fuulista. Waxaa laga yaabaa inaad horey u fuushay faras kahor, markii aad weynaatay ...
Fitness Rider: Jimicsiyada Lugta
Raacitaanka, ka baxsan ra'yigeeda, waa ciyaar isboorti. Hadana ha ii sheegin ...
Diyaarso diyaarinta jirka
A fuushanba xirfadlaha waxaa laga yaabaa inuu fuulo faras badan hal maalin, iyo si isdaba joog ah. Iyo inkasta oo qaar badan ...
Faraska diirimaadka kahor tababarka (I)
Sidayada oo kale, ka hor intaanu jimicsi sameyn waa inaan kala bixinaa oo aan yara dhaqaaqnaa, faraska waa inuu sameeyaa isla same.
Wareegyada kaabayaasha iyo halistooda (III): chambón
Chambón waa nooc ka mid ah qalabka caawinta ee aan u wici karno mid ka mid ah xulashooyinka jilicsan. Jira ...
Sida loo xakameeyo faraska dareenka adigoon dhimanayn isku dayga (V)
Kala-goynta si loo meeleeyo madaxa faraska
Maanta waxaan ka hadleynaa dib u dhigista, ama sida Juan Francisco F. Muñoz u leeyahay "tuujinta guluubka nalka." Barakaysan "qandaraasla'aan!" Haa…
In ka badan qarni, fuulitaanka faraska waxaa loo tixgeliyey qayb ka mid ah Ciyaaraha Olombikada, ee kama mid aha ...
Halista ka timaadda faraska
Waa run in laga bilaabo balooggan waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay galaan marinka fardaha ama gudaha ...